Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. संकटमा कृषि क्षेत्र – Emountain TV
काठमाडौ, ९ जेठ । आर्थिक सर्वेक्षण २०७५÷७६ अनुसार कुल ग्राहास्थ उत्पादनमा कृषिको योगदान २७ प्रतिशत छ । कुल जनसंख्याको ६२ दशमलब ४ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा संलग्न छन् । कृषि मुलुकको अर्थतन्त्र र रोजगारको मुख्य गन्तव्य भएपनि आवस्यक मल बीउ सिचाइ बजारको अभावमा गुज्रिरहेको छ ।
पछिल्लो समय कोरोनाका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र धान्ने कृषि थप संकटमा परेको छ । योजनावद्ध विकासको शुरुदेखि नै सरकारले कृषि क्षेत्रबाट आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जना गर्न भन्दै आएपनि कृषिका समस्या हल हुन सकेका छैनन् । हाल १५ औ योजना कार्यान्वयन भइरहदा पनि कृषि क्षेत्रका तमाम समस्या उत्तिकै छन् ।
समस्याग्रस्त कृषिमा सुधार हुन नसकिरहेको बेला कोरोनाका कारण कृषि क्षेत्र थप संकटमा पर्दै गएको छ । कुल क्षेफलको १८ प्रतिशत भूभाग कृषि योग्य भूमि छ, तर, कुल उर्वर जमिनको ३६ प्रतिशतमा मात्रै १२ महिना सिचाइ उपलब्ध छ । यतिबेला वर्षेबाली धानबाली लगाउने समय हो ।
मुलुकको मुख्य बाली धानले ४७ प्रतिशत योगदान गर्दछ । तर, यतिबेला किसान धानको बीउ पाउन सकेका छैनन् । कृषिमा आधुनकीकरण र व्यवसायीकरण गर्न भन्दै सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना समेत संचालनमा छ । यस्ता दर्जनौ कृषि सम्बन्धी परियोजनाहरु पनि छन् ।
तर सरकारी परियोजना परिणाममुखी बन्न सकेका छैनन् । योसंगै सरकारले भू–उपयोग ऐन २०७३ ल्याएको छ । ऐनमा कृषि गर्न योग्य जमिन बाँझो राख्नेलाई दण्डित गर्ने व्यवस्था छ । सरकारले कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउनुको साथै स्वदेश फर्कने युवालाई कृषिमा रोजगारी दिन कृषि कर्जामा सहुलियत दिन भनेको छ ।
कोरोनाका कारण विश्व श्रमबजार धराशायी भएको छ । स्वदेश तथा विदेशमा रहेका युवालाई रोजगारी दिनु सरकारको मुख्य दायित्व हो । यो दायित्व पुरा गर्न सरकारले कृषिमै सुधार ल्याउनुपर्ने आवस्यक छ ।
योजनावद्ध विकासको शुरु भएको ६ दशक बढी भएपनि कृषि क्षेत्रमा व्यवसायीकरण हुन सकेको छैन । कृषिका नाउमा ठूला ठूला ठेलीहरु बनेपनि कृषकमुखी नीति र कार्यक्रमको अभावमा नेपाली कृषि पछि परेको हो । पछिल्लो समय कोरोनाका कारण कृषि थप संकटमा पदै गएकोले सरकार बजेटमा कृषिलाई विशेष सम्बोधन गर्न सकेमा मात्रै कृषिमा रुपान्तरण संभव हुनेछ ।